Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli wuxuu ku socdaa kormeerka | RayHaber | raillynews
HometareenkaGaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli
Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli
20 / 01 / 2018 tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, ee xuduudaha magaalada ayaa sii wada kantaroolka adeegyada gaadiidka dadweynaha. Kooxaha Koontaroolka Gaadiidka ee xiriirka la leh Waaxda Gaadiidka Dadweynaha waxay baaritaano wada jir ah ku sameynayaan kooxaha waaxda Agaasinka taraafikada ee ku xiran Qeybta Booliska. Gawaarida 5 kun ee 945 ee gawaarida 2 kun ee 327, kuwaas oo lagu kormeeray gobolada Gölcük, İzmit iyo Gebze sanadkii la soo dhaafay, ayaa waxaa la marsiinaayay fal dambiyeedyo. Baska degmada 636 ayaa sidoo kale la soo sheegay. Wadarta 517 kun ee 773 TL ganaax ayaa lagu soo rogay gawaarida si aan kala sooc lahayn.
5 THOUSAND 945 VEHICLES BILAASH
Waajibaadka, waraaqaha iyo kormeerka ogolaanshaha wadooyinka basaska, basaska, gawaarida nooca adeega, oo bixiya adeegyada gaadiidka dadweynaha ee Kocaeli, waa la sii wadaa. 2017 kun oo ah gawaarida 5 ayaa la kormeerayay muddadii kormeerka ay sameynayeen kooxaha kormeerka magaalooyinka waaweyn iyo Agaasinka Amniga Gobolka ee 945. 2 kun oo 327 khaladaad gaadiid ah oo lagu go'aamiyay iyadoo la raacayo qawaaniinta kontaroolada ayaa lagu dabaqay dacwad ciqaabeed. Isku soo wada duuboo, ganaax dhan 517 kun 773 TL ayaa la jaray. Baadhitaan, caymis, laysanka wadis aan ku filneyn iyo dukumiintiyo maqan ayaa ku xirnaa gaariga 29.
LACAG LA'AAN KU SAMEEYO ADEEGYADA PIRATE
Qeybta Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Kocaeli, Maareeyaha Qeybta Gaadiidka Dhulka ee Agaasinka Baarista iyo Qeybaha waaxda kormeerka Waaxda Bilayska ee ka hortaga gaadiidka adeega burcad badeeda ayaa sii wadaya inay kordhiyaan shaqada kormeerka wadajirka ah. Gawaarida P-plate-ka ee u adeegaya shaqaalaha iyo ardayda Kocaeli oo dhan, ku habboonaanta, shahaadada wadada, laysanka, macalinka hagida, waraaqaha gawaarida iskuulka iyo koontaroolada suunka. Intaa waxaa u dheer, gawaarida adeegga budhcad-badeednimada ee ku hawlan baaxadda Agaasinka Guud ee Xarunta Amniga ee mamnuucidda taraafikada iyo ganaaxyada maamulka ayaa lagu dabaqay la-dagaallanka burcad-badeednimada.
Kormeerka Baasaska Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay, oo qayb ka ah degmada Kocaeli Magaalo-Weyne, ayaa loo fuliyaa iyada oo la raacayo qawaaniinta ay adeegsadaan Koorsooyinka Kormeeraha Guud ee Waaxda Gaadiidka Dadweynaha. Kooxo kormeeraya ayaa sii wada fulinta dalabyada rakaabka qarsoon ee gaariga iyo sidoo kale kormeerka marinnada iyo joojinta gawaarida rasmiga ah. Gawaarida waxaa lagala soconayaa unugga UKOM iyada oo loo marayo aruurinta lacag aruurinta elektiroonigga ah iyo nidaamka raadraaca gawaarida iyo kaamerooyinka ku jira gawaarida. Dhamaan xakamayntaas; Jawaabta rakaabka, sahaminta iyo rakaabka rakaabka ee gudaha iyo banaanka gaariga sidoo kale waxay iftiininayaan.
Izmit-raajada ayaa horseedaya sahankan adoo dooranaya Tareenka Kocaeli
Duulimaadyada Cusub Ee Ka Soo Baxaya Akçaray ilaa Izmit Bus Station Starts
50 kun gaadhi oo ay soo maraan Yavuz Sultan Selim Bridge